एकै मितिमा रेखा र रमेशको फिल्म, जीत कसको होला ? « Ramailo छ
एकै मितिमा रेखा र रमेशको फिल्म, जीत कसको होला ?
प्रकाशित मिति : Aug 6, 2017
समय : 8:46 am
अनमोल केसीको ‘कृ’ सरेपछि यस वर्षको तिहारमा दुई फिल्महरु बिच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । रेखा थापाले निर्माण गरेको ‘रुद्रप्रिया’ र रमेश उप्रेतीले निर्माण गरेको ‘ऐश्वर्या’ बिच कात्तिक २ गते हल बाँडफाँड हुनेछ । रेखा र रमेशले अभिनय समेत गरेका दुई फिल्म एक साथ प्रदर्शनमा आउँदा घाटा कसलाई पुग्ला नाफा कसलाई होला ? यसको लेखाजोखा अहिले गरिहाल्न हतारो हुनेछ । यसकारण ‘रुद्रप्रिया’ र ‘ऐश्वर्या’ बारे छोटकरीमा चर्चा गरौं ।
‘रुद्रप्रिया’ रेखा थापा आफैंले निर्माण गरेको यो चौथो फिल्म हो । रेखा फिल्मसबाट बनका ‘काली’, ‘हिम्मतवाली’ र ‘रामप्यारी’ले रेखालाई राम्रै नाफा दिए । नायक आर्यन सिग्देलसँग करिब ८ वर्षपछि पर्दामा जोडी जमाएकी रेखाले आफ्नो ब्यानरबाट बन्दै आइरहेका फिल्महरु भन्दा ‘रुद्रप्रिया’ फरक रहेको दाबी गरेकी छिन् । सुदीप बबी भूपालसिंहको निर्देशन रहेको फिल्ममा सरस्वती थापा र रमेश एमके पौडेल निर्माताको रुपमा रहेका छन् । फिल्मको पोस्टर र एउटा गीत सार्वजनिक भैसकेको छ । ‘रुद्रप्रिया’ को गीतको भिडियो हेर्नुस् :
एक समयका स्टार अभिनेता रमेश उप्रेतीले पहिलो पटक फिल्म निर्माण गरेका हुन् । लामो समयको गृहकार्य पछि रमेशले ‘ऐश्वर्या’को सुटिङ सुरु गरेका थिए । उसो त ‘ऐश्वर्या’ असोज ११ मै आउने भनिएको थियो । तर ‘छक्का पञ्जा २’ आउने भएपछि रमेशले फिल्म मिति सारे । अहिले उनी लक्ष्मीपुजामा फिल्म रिलिज गर्ने गरी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् । दिवाकर भट्टराईको निर्देशन रहेको फिल्म ‘ऐश्वर्या’मा रमेशसँगै केकी अधिकारी र नव नायिका दीपिका प्रसाईं मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् ।